Kharashka Dadweynaha - Isbahaysiga Caafimaadka ee Muhaajiriinta & Qaxootiga
9-kii Maarso, 2021, Waaxda Caddaaladdu waxay ku wargelisay Maxkamadda Sare ee Maraykanka inay ogolaatay inay ka noqoto racfaanka ay ku difaacayso xeerka dacwadda dadweynaha ee uu soo bandhigay maamulka Trump. Markii maxkamada sare ay laashay dacwada, amarkii maxkamada hoose ee ka hortagaya in xeerka lagu dhaqmo ayaa dib u dhaqan galay. Waaxda cadaaladda ayaa sidoo kale la laabatay racfaankeedii Maxkamadda Racfaanka ee 7aad, taas oo ka dhigan in degmada Waqooyiga ee Illinois ay go'aamisay in qaanuunka dacwadda dadweynaha ee Oktoobar 2019 uu ahaa mid aan ansax ahayn uu noqday kama dambays oo waxtar leh. Si loo dhaqan geliyo amarkaas maxkamadda, Adeegga Jinsiyadda iyo Socdaalka Mareykanka (USCIS) waxay si rasmi ah ula laabteen xeerkii dacwadda dadweynaha ee Oktoobar 2019.
Meeshii qaanuunka, USCIS waxay dib u soo celisay Hagitaanka Goobta 1999 si loo go'aamiyo haddii codsaduhu aan la aqbali karin sababo dacwo dadweyne. Hagahan waxa uu qeexayaa khidmadda guud ee qofka ah, noqday, ama ay u badan tahay in uu noqonayo ''sida ugu horaynba dawladda ugu tiirsan nolol maalmeedka, sida lagu muujiyay midkood (i) helitaanka kaalmada lacagta caddaanka ah ee dadweynaha ee dayactirka dakhliga ama (ii) Hay'ad u samaynta daryeelka muddada-dheer oo ay dawladdu kharashkeeda bixiso." Tani waxay la macno tahay in soogalootiga iyo qaxootiga ay hadda codsan karaan oo ay heli karaan faa'iido kasta oo kale oo dadweyne taas oo ay xaq u leeyihiin iyada oo aan iyaga lagu haysto marka ay codsanayaan gelitaanka Maraykanka ama hagaajinta socdaalka. heerka.
Bukaanka, tani waxay ka dhigan tahay inaad heli karto dheefaha Medicaid (oo loo yaqaan "Apple Health" caymiska Washington), iyo sidoo kale daryeelka degdegga ah iyo daawaynta COVID-19, adoon saamaynaynin xaaladdaada socdaalka. Si kastaba ha ahaatee, kuwa hela daryeelka muddada-dheer, ee hay'adaha, sida ta hospice ama xarunta kalkaalinta, waxaa laga yaabaa in loo tixgeliyo kharash dadweyne sida hoos timaada Hagidda Goobta 1999. Haddii tani ay khusayso adiga ama qof kasta oo aad taqaan, ama aad hayso su'aalo ku saabsan xaaladdaada gaarka ah, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad la xiriirto qareenka socdaalka si aad ugala hadasho saameynta daryeelkaas ku yeelanayo sharciga deganaanshaha rasmiga ah. Haddii tani ay khusayso adiga ama qof kasta oo aad taqaan, waxa laga yaabaa inaad rabto inaad la xidhiidho qareen socdaalka si aad ugala hadasho saamaynta daryeelkaas ku yeelan karo sharciga degananaanshaha rasmiga ah. Our Bogga Kheyraadka Sharciga iyo Socdaalka waxaa ku jira xiriiriyeyaal kaa caawinaya inaad hesho qareen haddii loo baahdo.
Ka baro waxbadan oo ku saabsan Tilmaamaha Goobta ee 1999 ee Su'aalaheena Su'aalaha Badan
Khayraadka iyo Tababarada
Halka maamulka Trump xeerkii dacwadda dadweynaha laga noqday oo uu yahay sii socon doonin, waxa ay abuurtay "saamayn qaboojin", waxaana sii socda jahawareer iyo walaac la xidhiidha isticmaalka barnaamijyada waxtarka bulshada. Hoos ka eeg agab waxbarasho oo luuqado badan ku hadla oo mawduucan laga helayo Ilaalinta Qoysaska Muhaajiriinta (PIF):
ABC-yada Dacwadda Dadweynaha
5ta Xaqiiqo ee ku Saabsan Dacwadda Dadweynaha
Maxaan Tahay Inaan Ogaado Markaan Carruurtayda Ka Qorayo Macaashka Dadweynaha?
Kharashka Dadweynaha: Tani ma aniga ayay i khusaysaa?
Waxyeelada la diiwangeliyay ee Siyaasadaha Lacag-bixinta Dadweynaha Inta lagu jiro Faafida COVID-19
Tallaalka COVID: Badbaado, Bilaash, iyo Doorashada Saxda ah ee Qoyskaaga (fidiyayaal waxaa lagu heli karaa luqado badan)
Maxaa u dambeeyay ee ka dhacaya agagaarka Charge?
Febraayo 2022 – Xeer cusub oo la soo jeediyay oo dadwayne; muddada faallooyinka waxay xidhmaysaa Abriil 25, 2022
Khamiista, Febraayo 24, Wasaaradda Amniga Gudaha ee Mareykanka ayaa soo saartay qoraalkooda xeer cusub oo la soo jeediyay. Xeerkani waxa uu go'aamiyaa ogolaanshaha qofka aan u dhalan Maraykanka iyada oo ku salaysan in ay u badan tahay in ay noqdaan "dacwad dadweyne," ama ugu horreyntii ku tiirsan yihiin dawladda.
Waxaan wali dib u eegis ku samaynaynaa xeerka cusub, laakiin waxa ay xaqiijinaysaa in sharcigii 2019 ee la dhaqan galiyay intii lagu jiray maamulka Trump aanu hadda shaqaynayn.
Xeerku waxa uu ku xidhan yahay 60 maalmood oo faallo ah, iyo dhammaan faallooyinka waa in la soo gudbiyaa ugu dambayn Abriil 25, 2022.
Janaayo 2022 – Iyaga oo ku nuuxnuuxsaday in xeerka dacwadda dadweynaha ee 2019 aanu hadda soconayn.
Bishii Noofambar 2021, Adeegyada Dhalashada iyo Socdaalka ee Mareykanka (USCIS) ayaa daabacday warqad ay ku nuuxnuuxsatay in 2019-ka sharciga qarashka guud uusan dhaqan galeynin. Waxa kale oo ay taxdaa tusaalooyinka faa'iidooyinka aan lacagta caddaanka ahayn ee aan loo isticmaali karin go'aaminta kharashka dadweynaha, oo ay ku jiraan Medicaid iyo lacagta cuntada. Warqadda oo dhan ka akhri bogga USCIS.
Oktoobar 2021 – Xeer-dejineed cusub oo dacwo dadweyne ayaa socda
Marka loo eego maamulkii hore, qawaaniin adag oo dadwayne iyo siyaasadaha ka dhanka ah socdaalka waxay si xun u saameeyeen caafimaadka iyo fayoqabka bulshooyinka soogalootiga ee gobolka Washington. Inkasta oo qaar badan oo ka mid ah siyaasadaha waxyeellada leh dib loo rogay, waxay sii wadaan inay abuuraan cabsi iyo inay dadka ka niyadjiyaan inay helaan faa'iidooyinka muhiimka ah. Hadda waxaan haysanaa fursad aan kaga qayb qaadano geeddi-socodka si aan u abuurno xeerar cusub. Anagoo wada shaqaynayna, waxaan gacan ka geysan karnaa hubinta sharciyada mustaqbalka inay ilaaliyaan marin u helka daryeelka caafimaadka iyo barnaamijyada dadweynaha ee soogalootiga Washington iyo guud ahaan Mareykanka.
Agoosto 23, 2021, Waaxda Amniga Gudaha (DHS) waxay soo saartay qoraal Ogeysiiska Sare ee Xeer-dejinta La Soo Jeediyay (ANPRM), ku martiqaadida faallooyinka dadwaynaha ee su'aalaha iyo mawduucyada DHS waxay ka fekereysaa xeerarka cusub ee kharashka dadweynaha ee ay diyaarinayso. Marka loo eego maamulka Biden, DHS waxay doonaysaa inay hubiso in xeerarka cusub aysan culaysyo aan loo baahnayn saarin muhaajiriinta. Gudaha ANPRM, DHS waxay sheegtay inay damacsan tahay inay soo diyaariso xeer aan "aan ku keenin cabsi aan loo baahnayn oo ka dhex jirta bulshooyinka soogalootiga ah ama aan soo bandhigin caqabado kale oo ku wajahan soogalootiga iyo qoysaskooda inay helaan adeegyada guud ee ay heli karaan, gaar ahaan marka la eego masiibada COVID-19 iyo natiijada ka dhalatay. caafimaadka dadweynaha iyo saamaynta dhaqaale ee muddada dheer ee Maraykanka."
Shabakadda Caafimaadka Bulshada ee Washington, Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington, Ururka Washington ee Caafimaadka Bulshada iyo 26 ka mid ah xarumaha caafimaadka beesha Washington ayaa soo gudbiyay a warqad faallo ka jawaabaya ANPRM Oktoobar 21, 2021.
ANPRM waxay ahayd kaliya talaabadii ugu horaysay ee hawshan. DHS waxay dib u eegi doontaa jawaabaha ay heshay ka dibna waxay daabici doontaa Ogeysiiska Xeer-dejinta la soo jeediyay. Marka taasi dhacdo, waxaa jiri doona fursad lagu faalloodo sharciga la soo jeediyay.
Fadlan la soco tillaabooyinka xiga ee habkan sharci-dejinta kharashka dadweynaha. Waxaan halkan ku wadaagi doonaa macluumaadka sida la heli karo. Wixii su'aalo dheeraad ah ama macluumaad la xidhiidha kharashka dadweynaha fadlan xor u noqo inaad la xidhiidho Jessica Hauffe at CHNW, [emailka waa la ilaaliyay].